အားသစ်လောင်း အစီအစဉ် – MBC
မတ် 4, 2020
ကျေးရွာဖွံဖြိုးရေး ကော်မတီ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်သင်တန်း
နှစ်ခြင်းအသင်းချုပ် ဝန်ထမ်းများ ၂၀၂၀ ခုနှစ် နှစ်သစ် အတွက် အမှုတော်ဆောင် ဆက်ကပ်ရာတွင် ခွန်အားသစ်များဖြင့် လျှောက်လှမ်း နိုင်စေရန်အတွက် တစ်ရက်တာ အားသစ်လောင်း အစီအစဉ်ကို ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက် သောကြာနေ့တွင် စန္ဒယော် အပန်းဖြေစခန်းသို့ သွားရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ နံနက် (ရး၀၀)နာရီအချိန်တွင် အင်းစိန် မြန်မာနိုင်ငံ ဓမ္မတက္ကသိုလ် ကျောင်းရှေ့နှင့် အသင်းချုပ်ဝင်း ရှေ့တွင် စုရပ်အဖြစ် ထားရှိကာ စတင် ထွက်ခွာကြပြီး နံနက်(၉း၃၀)နာရီတွင် အပန်းဖြေစခန်းသို့ ရောက်ရှိခဲ့ ပါသည်။ နံနက် ဝတ်ပြု ကိုးကွယ်ခြင်းတွင် အသင်းချုပ် ဘဏ္ဍာထိန်း ဆရာမနန်းသူဇာမွန်က3keys အကြောင်းကို
၁. Communications ထာဝရဘုရား၏ ကယ်တင်ခြင်းတရားကို ကျယ်ပြန့်အောင် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်ရန်၊
နှစ်ခြင်းတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကျင့်သုံးမှုကို မိမိ ကိုယ်တိုင်သာမက အခြားသူများကိုလည်း ဝေငှရန်၊
၂. Vision ဝိညာဉ်ပါရမီဖွံ့ဖြိုးရန်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ နိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်ရန် ရူပါရုံထားလျက်
၃. Accountability တာဝန်ယူမှုရှိရန် တိုက်တွန်း ခွန်အားပေး ဝေငှခဲ့ပြီး၊ ခေါင်းဆောင်မြှင့်တင်ရေးဌာန တာဝန်ခံ Rev. အိုက်နပ်တောင်းက အထူးဆုတောင်း ပေးပါသည်။
ဆက်လက်၍ လူငယ်ဌာန တာဝန်ခံ ဆရာ ဝင်းထွဋ်သာကြည်က TEAM Building အကြောင်းကို
1. Togetherness & transparency
2. Equity/ Empathy
3. Associative strength
4. Mutual respect / understanding ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ခဲ့ပြီး၊ အဖွဲ့အစည်းများသည်
Forming ဖွဲ့စည်းကာစ နည်းနာမကျ
Storming ညီညွတ်မရ မုန်တိုင်းကျ
Norming စနစ်ရှိမှ ပုံစံကျ
Performing စည်းရုံးလှုပ်ရှား အဖွဲ့ဝင်များ
Transforming အသွင်ပြောင်းဆောင်ရွက် ရှေ့သို့ဆက် ဟူ၍ ဝေငှခဲ့ပြီး၊ စာပေနှင့် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရေးဌာန တာဝန်ခံ ဆရာ စောစိုင်းလတ် မဟူရာဝါး နှင့် လူငယ်ဌာန တာဝန်ခံ ဆရာ ဂျဒ်ဆင်ညို ဦးဆောင်လျက် ချီးမွမ်း သီချင်းများကို အားလုံး အတူတကွ သီဆိုခဲ့ကြပါသည်။ အမှတ်တရ စုပေါင်းဓာတ်ပုံလည်း ရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ကာရာအိုကေသီဆိုခြင်း၊ ရေကစားခြင်း၊ ငါးမျှားခြင်း၊ အနားယူခြင်းများဖြင့် အားသစ်လောင်းခဲ့ကြပြီး မွန်းတည့် (၁၂း၀၀)နာရီတွင် ဘူဖေးနေ့လည်စာကို ရုံးအုပ်ကြီး ဆရာမန်းဂီဒီယံ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် အတူတကွ သုံးဆောင်ကြပါသည်။ နေ့လည်စာအပြီးတွင် ခေတ္တအနားယူကြပြီး ဆရာ ဂျဒ်ဆင်ညို ဦးဆောင်၍ မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ပြုလုပ်ကာ မွန်းလွဲ (၂း၀၀)နာရီတွင် ပြန်လည် ထွက်ခွာ လာခဲ့ကြပါသည်။ ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း (၆၄)ဦး ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။
အောက်တိုဘာ 19, 2020
COVID 19 ကာလ နှစ်ခြင်း အသင်းချုပ် ဆောင်ရွက်မှု
ဇွန် 8, 2020